संघीयतानै प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ - Karobar National Economic Daily
संघीयतानै प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ
query_builderApril 4, 2017 12:33 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1432
पूर्वसचिव/प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनाली
लोकसेवा आयोगको सचिवबाट अवकास पाएका श्यामप्रसाद मैनाली हक्की स्वभावका पूर्वप्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । ३३ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका मैनाली ‘कनिष्ठ सचिव’ लिलामणी पौडेललाई मुख्य सचिवमा बढुवा गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णयको पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध जनाएपछि थप चर्चामा आएका थिए ।
निजामती सेवा प्रवेशअघि शिक्षण पेशामा आबद्ध मैनालीसँग १५ वर्ष विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न विभाग/कार्यालय तथा त्यसपछि स्थानीय विकास, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयमा पनि सचिव भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव छ ।
अवकासपछि अध्ययन/अध्यापन तथा विभिन्न सामाजिक सेवामा सकृय उनी नेताहरूको अदूरदर्शीता, राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भागबन्डा, बाह्य शक्तिका अस्वाभाविक चलखेललगायत कारण मुलुक थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको बताउँछन् ।
देशको आवश्यकता र आमनागरिकको चाहनाभन्दा पनि विदेशी शक्तिको उक्साहटमा जबरजस्ती संघीयता लादिएको मैनालीको निष्कर्ष छ । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुकका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्ने खतरा रहेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारअनुसारको संरचनालाई धान्ने स्रोत–साधन नेपालसँग नभएको र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसैसन्दर्भमा नेपालले अबलम्वन गरेको संघीय संरचना, त्यसअनुसारको साधनस्रोत व्यवस्थापन, संघीयतामा निजामती प्रशासन, विकास÷निर्माण, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलगायत विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले पूर्वसचिव मैनालीसँग गरेको कुराकानी ः
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जानु जरुरी छ । २००८ सालमा नेपाल तराई कांग्रेस नामको राजनीतिक दल स्थापना भएको थियो । उसले संघीयतासहितको स्वतन्त्र तराईको माग राखेको थियो ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यही मागलाई तराई–मधेसका नेताहरूले एजेन्डा बनाएर स्थापित भएका हुन् । संघीयता कतिपय मुलुकमा सफल भएर गएको पनि छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नेपाली जनताले स्वीकार्छन् या स्वीकार्दैनन्, आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको बहस कहिँकतै नगरी आएको छ । मेरो बिचारमा संघीयता नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध आयातित अवधारणा हो । यो नेपालमा अफापै हो भन्न त मिल्दैन । कार्यान्वयनको चरणमा छ । जसरी आयो त्यसरी कार्यान्वयन गर्नुभन्दा गम्भीर गृहकार्य गरेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।
आयातित एजेन्डा हो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ?
यो राजनीतिक कारणले नै आएको हो । प्रमुख दलका नेताहरूनै यसका कारक हुन् । संघीयता वा गणतन्त्रअघिका संयन्त्र वा व्यवस्था आफैं खराब थिएनन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने केही व्यक्ति गलत थिए होलान् । राजतन्त्र आफैंमा एउटा संस्था हो ।
आफैंमा भ्रष्ट हुँदैन । राजसंस्था एक मात्र राष्ट्रवादी संस्था थियो । विभिन्न कारणले त्यसलाई हटाइयो, अहिले देशमा राष्ट्रवादी संस्थाको अभाव खड्किएको छ । राजतन्त्र जरुरी थियो/थिएन त्यो अर्को पक्ष हो । तर, राजतन्त्रनै यस्तो संस्था रहेछ, जो एकात्मक छ र राष्ट्रवादी शक्ति पनि त्यही नै रहेछ । राजा महेन्द्र हेर्नुस्, उनी राष्ट्रवादी थिए ।
वीरेन्द्र प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त राजा थिए । विदेशीसँग शरण पर्नुभन्दा नेपालीसँगै झुक्नु उपयुक्त ठानेर वीरेन्द्रले २०४६ सालमा बहुदल घोषणा गरेका हुन् । किनकी राजा बन्न देश चाहिन्छ, तर राजनीति त जहाँबाट गरे पनि हुन्छ । त्यो सोच राजसंस्थामा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने देखियो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूमा चाहीँ राष्ट्रवादी सोच नदेखिएकै हो त ?
नेपालमा धेरै नेता जन्मिए । तर, देशभक्त र राष्ट्रवादी सोच राख्ने निकै कम मात्रै छन् । जस्तो वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाबाहेक अधिकांश नेताले देशका लागि कहिल्यै सोचेनन् ।
उनीहरूमा राष्ट्रवादी भावना पनि आएन । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे । जसले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलायो । अझ पछिल्लो समय त संघीयताका नाममा देशमा आर्थिक दोहन तीब्ररूपमा बढेको छ ।
यसको मतलव तपाईंलाई संघीयता पटक्कै मन परेको छैन भन्दा हुन्छ ?
अन्तरिम सविधान आयो, त्यतिबेला म नेपाल सरकारको सहसचिव भएर नाराबाजी गर्दा पनि संघीयताको नामसमेत सुनिएन । त्यसपछि मात्रै वाह्य ईशारामा एक प्रदेश एक मधेसको कुरा आएको हो । यो विषय स्पष्ट रूपमा भन्दा अरुले मलाई कहिलेकाहीँ ‘एन्टि इन्डियन’ पनि भन्न सक्छन् । त्यो गलत हो । जे–जे कुरा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छन्, त्यसलाई त स्वीकार्न सकिँदैन नि ।
संघीयता त आइसक्यो कार्यान्वयनमा जाँदा कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
हाम्रो संघीयताको मोडेल के हो भन्ने अझै अन्योल छ । तर अब आइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा तीन÷चार वटा कुरा सोच्नैपर्छ । रिसोर्स, डिफेन्स, सार्वभौमसत्ता र परराष्ट्र मामिलाका कुरा केन्द्रमा राखिएको छ । ती बाहेकका स्रोतहरू जुटाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । के कसरी गर्ने कसलाई कतिसम्म जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुरा संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
कर्णाली भनौं या सुदूरपश्चिम जहिले पनि पछि परेको छ । अन्य ठाउँको तुलनामा त्यहाँको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराको सर्भे गर्नुपर्छ । कहाँनिर स्ट्यान्डर्र छ, त्यो पहिल्याउनुपर्छ । हिजोको जुन प्रवृति छ, त्यसबाट आउन डिपार्चर खोजिएन भने यो एकदमै बोझिलो हुन्छ ।
अर्को कुरा संघीयता राजनीतिक एजेण्डा हो कि हैन ? उदाहरणका लागि अमेरिका, सोभियत संघ, इयूलगायतका मुलुक हेर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रलाई साथ–साथै लान सकिएन भने बोझिलो हुन्छ, यस्ता धेरै वटा मुलुक छन् । संघीयता डिजाईनअन्तर्गत आएको हो ।
अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ?
तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएको के हो केही मानिसको निजी स्वार्थले हामीले ६ महिना लामो नाकाबन्दी बेहोर्नुप¥यो । त्यो अवस्था थियो भने नेपालको तराई मात्रै छुट्याएर आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदा के हुन्छ, त्यो सोचनीय विषय छ । किनभने यहाँका वास्तविक मानिस अल्पमतमा पर्ने समस्या छ । मुख्यमन्त्री हुने वित्तिकै आयातित मान्छेले नै क्याप्चर गर्न खोज्छन् । त्यसले पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन सक्छ ।
भोलि बाध्य भएर अरु कुनै निर्णय गराउन दबाब दिने बित्तिकै राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न आउन सक्छ । नेपाल प्रयोगशाला बनेको छ । हामी प्रान्तमा पनि जान्छौं, धेरै कुरा म्यानेज गरेर जान सकियो भने ठूलो आशिर्वाद हुन सक्छ ।
आजसम्मको जुन प्राक्टिस छ, त्यो खोजमूलक छैन । आखिर बोकेको मानसिक संस्कार त एउटै हो, संघीयतामा जाने बित्तिकै डिपाचर हुन्छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने ? संवैधानिक प्रत्याभूतिसहितको संघीयता लागु भयो भने त्यसले केही महत्व राख्छ । निक्षेपण आफैंमा बेठीक होइन । अध्ययन अनुसन्धान बिना गरिएको संघीयता अनुत्पादक हुन सक्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा राज्यलाई थप भार पर्ने त निश्चित छ नै, त्यसका लागि स्रोत जुटाउन कत्तिको समस्या पर्ला ?
हो, पहिलो त त्यहाँको स्रोत–साधनले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा आर्थिक विकासमा कमजोर छ, रिर्सोस र जुन स्रोत छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । आजसम्म नेपालको समस्या यही भएर जस्ताको तस्तै रहेको हो । जो प्रभावशाली नेता छ उसको तजबिजमा बजेट जाने र जो कमजोर छ त्यहाँको विकास खुम्चिँदै जाने गर्दा कुनै–कुनै क्षेत्र अपांग जस्तै बन्दै गए ।
१० वर्ष अघिको जुम्ला र त्यतिबेलाको काठमाडौं अनि अहिलेको दुवै जिल्लाको अवस्था हेर्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ । कार्यान्वयनमा जाँदा संघीयताको पहिलो एजेन्डा पनि यही हुन सक्छ । अर्को कुरा प्रत्येक प्रदेशसँग केही न केही रिसोर्स हुन सक्छन् । हामीसँग २ नम्बर प्रदेश छ, कर्णाली छ, काठमाडौं छ, तर ती बीचमा ठूलो ग्याप छ । केन्द्रीय संविधान हुन्छ, प्रान्तीय विधान हुन्छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, सीप त्यही प्रान्तमा हुन्छ । तर, दुखको कुरा संविधानको प्रारूपले हामी पुरानै शैलीमा फर्किंदै छौं । कर लगाउने कुरासम्म पनि केन्द्रीय नीति नियमको मातहतमा जाने कुरा छ त्यो संघीयता होइन । निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । मेरो विचारमा आन्तरिक स्रोतका लागि खासै समस्या नपर्ला तर वाह्य स्रोत जुटाउन भने ठूलो चुनौती छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र नै विकासको बाधक छ भन्ने गरिन्छ । तपाईं यो मान्न तयार हुनुहुन्छ ?
सरकार जस्तो हुन्छ, हाम्रो ब्यूरोक्र्यासी पनि त्यस्तै छ । ३४ वर्षसम्म निजामती सेवामा बसें र ७ वर्षसम्म सचिव हुँदा पनि मैले यो विषयमा केही गर्न सकिनँ । ब्यूरोक्र्यासीमा क्षमता छ, राजानीतिक प्रतिबद्धता आयो भने अहिलेकै कर्मचारीतन्त्रले हाँक्न सक्छ ।
म असफल सचिव हुँ । तीन÷चार वटा नचाहिँदा निर्णय भएका थिए । मन्त्रालय एउटा तर सचिवहरू धेरै भए । अर्को कुरा पूर्णरूपमा ट्रेड युनियनलाई अधिकार दियौं । लोकसेवाको २४ घ मा बढुवाको कुरा छ, त्यो बढुवाले खासै महत्व पाएन । यो सवका पछाडि हामी यो लेवलका सचिवहरू भयौं, के गर्दा सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू खुसी हुन्छन् त्यही मात्रै गर्न प्रेरित भयौं ।
त्यसैले हाम्रो ब्यूरोक्र्यासी नै बाधक हो, क्षमता छ काम गर्न सक्दैन । ब्यूरोक्र्यासी भनेको सिस्टम हो, त्यसलाई कसरी दिने भन्ने कुरा राजनीतिले गाइड गरेको छ । कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी भन्ने हैसियत नै राजनीतिले दिएन । त्यो स्टेटमेन्टनै जन्मिएन । म कर्मचारी नै भए पनि राजनीतिलाई नियालिरहेको छु । राजनीतिको सेकेन्ड लेयरसम्म आशालाग्दो मानिस देखिएन । राष्ट्रको बेस्ट क्रिम भनेको ब्यूरोक्र्यासी नै हो ।
निर्वाचनपछिको कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो धेरै सोचनीय कुरा छ । एउटा कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने छ । ८६ हजार निजामती कर्मचारी मात्रै छन् । सबैको अहिले केन्द्रीय कार्यालय छन् । केन्द्रीयस्तरमा भएका सबै निकायलाई प्रान्तीय/स्थानीय तहमा लैजाँदा राज्यलाई खर्चको भार बढ्छ नै । ती सबै ठाउँको आवश्यकता फरक हुन सक्छ ।
जुम्लामा इन्जिनियर चाहिँदा काठमाडौंमा कर्मचारी चाहिन सक्छ । अर्को कुरा केन्द्रीयस्तरमा काम गरेका कर्मचारीमा विभेद देखिएकोे छ । तर संविधानले व्यवस्था गरे पनि पनि हाम्रो सरकार निक्कै कमजोर छ, कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । पोस्टिङ गर्ने बित्तिकै टे«ड युनियनहरू झन्डा लिएर आउँछन् । यसले अर्को कुरा ल्याउन सक्छ ।
तीबाहेक राजनीतिक दलहरूले जनतालाई ठूला–ठूला आश्वासन दिएका छन्, त्यस्ता आकांक्षाले स्रोत साधन नहुँदा एकात्मक शासनमा बजेटको प्रारूप कस्तो देखिन्छ भने विकास बजेटभन्दा साधारण बजेट बढी देखिने भएपछि विदेशीदाताले प्रश्न उठाउन लागेका छन् । आर्थिक रूपमा प्रशासनिक दायित्व बढ्ने देखिन्छ । यस्तो चक्रब्यूहमा हामी छौं । प्रोफेसनल अस्थिरता छ । अर्कोतिर संघीयता छ । चेकोस्लाभिया र सुडानको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदै छ, यसमा बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ?
प्रत्येक प्रान्तका आ–आफ्नै विधान हुन्छन् । खाली डिफेन्स र परराष्ट्र मामिला हेर्न नपाउने हो । यस्तो हिसाबले केन्द्रीय बजेटअनुसार नै बन्ने हो संघीय बजेट ।
प्रान्तीय सरकारले आफ्नो स्थानीयस्तरलाई बाँडफाँड गर्ने हो । केन्द्र र स्थानीय तहबाट उठ्ने राजश्व नै बजेटको स्रोत हो । अर्को स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता पनि हो । हामी भारतसँग परनिर्भरता बढ्दा भारतको प्रान्त जस्तै छौं ।
हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता देखाउन सकेनौं, मुख्य कुरा यही हो । नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भनेर विश्वव्यापी अध्ययन भएको होइन । अन्धाधुन्ध संघीयताका नाममा आर्थिक स्रोत जुट्न सक्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छैन । भएको रिसोर्सलाई मात्रै प्रयोग गरेर प्रशासनिक खर्च धान्ने हो । केन्द्रले नै बजेट पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यो साईजमा हुने बित्तिकै पावर टसल हुन्छ नै । घुमीफिरी आर्थिक पक्षकै कारणले संघीयता धरापमा पर्छ कि भन्ने आशंका छ । आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ ।
नेपालमा विकासका कुरा धेरै भए, तर ६ दशकको अवस्था हेर्द हामी सरदर ५ प्रतिशतमै सिमित भएका छौं, योजनाबद्ध विकासमा हामी कहाँ निर चुक्यौं ?
विकासका कुरा धेरै पहिलेदेखि आएको हो । २०४६ सालदेखिको विकासलाई हेर्दा हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । राजनीतिक दलले आफ्नो हैसियत नै बुझेनन् । एउटा–एउटा केशमा चुकेका छन् । भ्रष्टाचारको कुराले अवैध काम बढी हुन थाले । व्यक्तिवादी सोच हाबी भयो । साउथ ब्लकको निर्देशन बिना कुनै पनि निर्णय हुन छाडे ।
त्यस्तो मानसिकतामा राजनीति छ, अनि हाम्रो विकास कसरी हुन्छ ? सार्वभौममुलुक भएको जनतालाई आभाष नै छैन । भुटानभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक हिसावमा चुक्यौं, विकास निर्माणमा चुक्यौं, सम्मृद्धिका कुरामा चुक्यौं । लिगेसीका कुरामा चुक्यौं, जसले हामी विकासमा सधैं पछि परेका छौं । परनिर्भरता बढेको बढेको छ ।
सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू इमान्दार हुनुपर्छ । विकास निर्माणमा निरन्तरता चाहिएको छ, हामीकहाँ निरन्तरताको अभाव छ । हामीले जतिसुकै गाली गरे पनि राजनीति सुध्रिएन भने कर्मचारी मात्रै होइन, सिंगो मुलुक नै बिग्रन्छ ।
तपाईंले निजामती सेवामा ३ दशकभन्दा बढी सेवा गर्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा निजामती सेवालाई थप जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिएला ?
निजामती सेवाका कर्मचारीले सरकारका कर्मचारी हौं भन्ने विर्सनु हुँदैन । अर्को कुरा टे«ड युनियन हाबी छ । टे«ड युनियनले पेशाको हक हित र सेवा सुविधाको कुरा गर्न पाउँछन्, तर अरु केही गर्न पाउने अधिकार कर्मचारीसँग छैन । हामीकहाँ ठीक उल्टो छ, कर्मचारीले सरुवा र बढुवाका प्रस्ताव लिएर हिँड्ने गरेका छन् ।
खटिएका कर्मचारीले काम गर्नुपर्दैन, खटाएका ठाउँमा जानुपर्दैन । यस्तो संस्कारको विकास भएको छ । दुई वटा कामबाहेक अरु गर्न नपाउने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलहरूले सामूहिक सौदाबाजीबाट कर्मचारीतन्त्रलाई कडाई नगरेसम्म कर्मचारीतन्त्रले केही गर्न सक्दैन ।
नेपालमा उदारीकरणको सुरुवातसँगै विकेन्द्रकरणको अवधारणा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन नि ?
पञ्चायतकालमै नेपालमा विकेन्द्रीकरणको कुरा आएको हो । तर यो व्यवस्था परिपक्व भएन भनेर लागु हुन सकेन । नेपालमा विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणको कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् ।
नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई विश्वमा नमुनाको रूपमा लिइए पनि विकेन्द्रीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेन । जस्तो कि २०४७ सालको संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सर्वोत्कृष्ट मानिन्थ्यो ।
स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त फेल हुनुका पछाडिको कारण के हो ?
केन्द्रीय नेता भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । स्थानीय निकायमा चलेको प्राक्टिस भनेको मिलीजुली भागबण्डा हो । सम्बन्धित ठाउँमा स्रोत साधन गइसकेपछि पनि स्थानी टाठाबाठाहरूले क्याप्चर गरे । केन्द्रमा राजनीतिक दलहरूको जस्तो टसल भए पनि जिल्लामा मिलिजुली भागबण्डा चल्छ । त्यसैले पनि स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त लगभग फेल भएको हो ।
अर्को कुरा निर्वाचित निकायको विकल्पका रूपमा कर्मचारी बसेका छन् । जवाफदेहीता नभएपछि स्रोत साधनमा टेकेर भ्रष्टाचार गर्न पाउने भए । राजनीतिक दल भन्ने बित्तिकै जनताका दल भए ।
निर्वाचनको घोषणा भइसक्यो, एउटा पक्ष चुनावमा नजाने भन्दैछ भने अर्को पक्षले जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्दैछ । पूर्व प्रशासकको हैसियतले भन्नुपर्दा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?
सरसर्ती हेर्दा त पहिलो गाँसमै ढुंगा होला जस्तो देखिएको छ । तर, निर्वाचन हुन्छ । कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि लोकमान चाँडै चम्के, चाँडै लम्के । अयोधीप्रसादले के गर्न खोजेका हुन् मैले बुझ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको विधान संशोधन गर्ने अधिकार आयोगसँग छैन । यसकारण मौका पाउने बित्तिकै आफ्नो क्षेत्र जम्प गर्ने प्रचलन छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरामा अहिले जे देखिएको छ, हिजोसम्मको कुरा हेर्दा मधेसी मोर्चा सकेसम्म चुनाव बिथोल्ने मनस्थितिमा छ । त्यसलाई अरु दलले पनि बुझेका छन् होला । चुनाव नहुने वित्तिकै हाम्रा कुनै एजेण्डा संस्थागत गर्न सकिँदैन भन्ने पनि उनीहरूमा द्विविधा छ । निर्वाचनको मिति सार्ने बित्तिकै सरकारलाई ठूलो जोखिम छ ।
त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ नै । भाग नलिने भन्ने कुरा त छ नै । जुन लेवलको उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, तथापी कर्मचारीलाई सुम्पिनुभन्दा त निर्वाचनबाट एउटा एकाउन्टेवल ब्यक्ति आउँछ । त्यसैले पनि निर्वाचन हुनु जरुरी छ ।
हामी निर्वाचनको मुखैमा छौं तर मुलुकमा धेरै समस्या छन् । यसको समाधान कसरी गर्ने ?
नेपाल लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट नमूना हो । विकेन्द्रीकरण, निक्षेपण, अधिकार प्रत्यायोजनका कुरा लोकतन्त्रबाटै हुने हुन् । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं, यसबाट अब पछि फर्किन मिल्दैन । केही कुरामा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो पक्ष स्रोत साधन हो । जनताले हिजोको दिनमा जे सुविधा पाएका थिए, त्योभन्दा कम सुविधा पाए भने त्यस्तो ठाउँमा संघीयता संस्थागत हुन सक्दैन । नेपालको अहिलेसम्मको तथ्य के हो भने ६ वटा जिल्लाबाट ८५ प्रतिशत राजस्व जम्मा हुन्छ बाँकी ६९ वटा जिल्लाबाट १५ प्रतिशत राजस्व आउने हो । यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
संघीयता लोकसेवा आयोग पूर्वप्रशासक